बोक्सी आरोपमा मारिएकी लक्ष्मीको पाँच दिन बित्दापनि किन भएन पोस्टमार्टम ? | News Dabali
बोक्सी आरोपमा मारिएकी लक्ष्मीको पाँच दिन बित्दापनि किन भएन पोस्टमार्टम ?
December 14, 2016 | 9:06 am
काठमाडौँ – नाम्लोले बाँधेर मलमूत्र खुवाउँदै चिर्पटले हानेर घाइते बनाइएकी काभ्रे सानो बाङथलीकी लक्ष्मी परियारको मृत्यु भएको पाँच दिन बित्दा पनि पोस्टमार्टम भएको छैन । शव त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ । मानवअधिकार आयोग तथा राष्ट्रिय दलित आयोगले स्थलगत अनुगमनपछि मात्र पोस्टमार्टम गर्न आग्रह गरेकाले रोकिएको प्रहरीले जनाएको छ । आयोगले सोमबार तथा दलित आयोगले मंगलबार घटनास्थलमा पुगी अनुसन्धान अघि बढाएका छन् । बुधबार पोस्टमार्टम गर्न लागिएको छ ।
गत २० मंसिरमा सूर्याेदय स्कुलको प्रांगणको पोलमा बाँधेर लक्ष्मीलाई कुटपिट गरी मलमूत्र खुवाइएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थलगत अनुगमनबाट पुष्टि भइसकेको छ । बोक्सी भन्दै उनलाई कुटपिट भएको मृतकका छोरा र स्थानीयले बताएका छन् । तर, गाली गर्ने क्रममा बोक्सी भनेको वा बोक्सीकै आरोप लगाएर कुटपिट गरेको भन्ने विषय प्रस्ट भइनसकेको अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी तथा अधिकारकर्मीले बताएका छन् । २० गते उनलाई कुटपिट गरी घाइते बनाएको चार दिनपछि उनको मृत्यु भएको थियो । यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
परियारको हत्या आरोपमा प्रहरीले उनका श्रीमान्सहित चारजनाविरुद्ध ज्यान मुद्दा अघि बढाएको छ । बोक्सीको आरोप लगाउँदै स्कुलको पोलमा बाँधेर मानव मलमूत्र खुवाउँदै कुटपिट गर्ने स्थानीय शिक्षक हीरा लामा, उनकी आमा काइँलीमाया लामा, सोही गाउँकी निरमाया तामाङ र लक्ष्मीका श्रीमान् मिलनलाई अदालतमा पेस गरी थुनामा राख्ने म्याद लिएर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
स्थानीय महिला निरमायाले लक्ष्मीलाई बाँध्न डोरी दिँदै हीरा लामालाई सहयोग गरेकी थिइन् । मिलनले आफूले श्रीमतीलाई कुटेको स्विकारेका छन् । हत्यामा चारजनाको संलग्नता पुष्टि भएकाले उनीहरूलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थुनामा राखी अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी सहकुल थापाले बताए, ।